Caalamka Online » Dowlada Tunuusiya oo hal shakhsi dartii Xiriirka ugu jartay Dowlada Imaaraatka Carabta
Dowlada Tunuusiya oo hal shakhsi dartii Xiriirka ugu jartay Dowlada Imaaraatka Carabta
Wasaaradda gaadiidka Tunisia ayaa ku dhawaaqday in ay “go’aansatay in ay joojiso duullimaadyada Emirates ee Tunis” illaa iyo inta diyaaradaha looga helayo xal ku habboon oo ay ku hawlgalaan iyada oo la raacayo sharciga caalamiga ah iyo heshiisyada. ”
Duulimaadyada diyaaradaha ee Imaaraadka Carabta ayaa la joojiyay safarada ay ku tagayeen Tunis iyo Dubai, sida ay amar ku bixisay xukuumadda Tuniisiya, iyada oo go’aanka dawlada uu dhaqangalayo 25 December, 2017,” sida laga soo xigtay warbixinta wasaarada.
Go’aanka dawlada Tunis ayaa imaanaya laba maalmood ka dib markii Imaaraadka Carabta ay si ku-meelgaar ah u joojiyeen safarka haweeney Tunisian ah iyada oo aan wax faahfaahin dheeri ah laga bixin waqtigaas, taas oo keentay in ay ka careysiiso dawlada Tunuusiya.
Wax yar ka dib markii la mamnuucay duulimaadyada, Safiirka Imaaraadka Carabta ee Tunis ayaa sidoo kale looga yeeray xafiiska Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Tuniisiya.
Dhanka kale, Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in “xogta amaanka” ay sababeen dib u dhaca ku yimid haweeneyda Tunisian ka ah taas oo keentay in la sameeyo baaritaan dheeri ah maalintii Jimcaha.